घरमै डाक्टर : खुट्टा सुन्निने के के कारण हुन सक्छन् ?
माघ ९, २०७४ मगलवार २०:००:११
खुट्टा सुन्निनु एउटा साधारण समस्या हो । यसको कारण अति सरलदेखि अत्यन्तै जटिलसम्म हुन सक्छ । त्यसैले खुट्टा सुन्निएको छ भने, तुरुन्तै कारणको बारेमा जाँच गर्नुपर्छ । खुट्टाको हड्डी वा गोलीगाँठो भन्दा माथि औंलाले थिच्दा सुन्निएको भए खाल्डो देखिन्छ । औलाको टुप्पाले ३० सेकेण्ड जत...
युवतीहरुले ‘प्राइभेट अंग’ कसरी सफा गर्ने ? डा अचला वैद्यको टिप्स
पुस २५, २०७४ बुधवार ०२:११:२८
पुस २३, २०७४ आइतवार १८:१०:१२
एजेन्सी– आमाले नवजात शिशुलाई प्रायः छातीको देब्रेतर्फ च्यापेर राखेका हुन्छन् । केही वैज्ञानिकले आमाले छातीको बायाँतर्फ बच्चालाई च्यापेर राख्दाको रहस्य पत्ता लगाएको बताएका छन्। बायाँ भागमा राख्दा बच्चाको दिमागको दाहिने भाग सक्रिय हुने र यसले आमा तथा बच्चाबीच आत्मी...
घरमै डाक्टरः मोबाइल र कम्प्युटर धेरै चलाउनेलाई हुने अाँखाको रोग के हो ?
पुस १५, २०७४ शनिवार १६:११:०४
मोबाइल र कम्प्युटर धेरै चलाउनेलाई हुने अाँखाको रोग के हो ? - अारपी हामीले गर्ने धेरै काम पछिल्लो समय विकास भएका प्रविधिले निकै सहज बनाइदिएको छ । साना नाीहरुलाई र्‍याम्स सिकाउने, स्कूले विद्यार्थी पढ्नदेखि सबै कार्यालयहरुका काम कम्प्युटर, मोवाइलबाटै गर्न थ...
घरमै डाक्टरः म ३१ वर्षको भएँ । मेरो बेला–बेला छाति दुखिरहन्छ । किन होला ?
पुस ११, २०७४ बुधवार ०१:२१:००
म ३१ वर्षको भएँ । मेरो बेला–बेला छाति दुखिरहन्छ । किन होला ? कतिपय अवस्थामा मानिस सामान्य रहँदासमेत छाती दुख्ने गर्छ । यसरी दुख्नासाथ मानिसहरू मुटुसम्बन्धी रोग लागेको भन्दै चिकित्सककहाँ पुग्ने गर्छन् । तर, छाती दुख्नासाथ सबै दुखाई हृदयाघात र मुटु रोगक...
घरमै डाक्टर– टेस्ट्युब बेबी कस्ता दम्पत्तीका लागि उपयुक्त ?
पुस १०, २०७४ सोमवार १५:१७:००
हाम्रो विवाह भएको ५ वर्ष भयो । तर, सन्तानको रहर पूरा भएन । साथीहरुले टेस्टट्यु बेबी जन्माउन भनिरहेका छन् । यो कस्तो प्रक्रिया हो । बताइदिनुभए आभारी हुने थिएँ । – राेहिणी मानिसको जन्म प्राकृतिक संरचनाअन्तर्गत शरीर विज्ञानसँग सम्बन्धित विषय हो । महिला र ...
घरमै डाक्टर– हातखुट्टा झमझम्याइरहेको महशुस हुन्छ, किन होला ?
मंसिर २३, २०७४ शनिवार १८:५०:००
बिनासित्ति मेरो हात हातखुट्टा झमझम्याइरहेको महशुस हुन्छ । किन होला ? को साझा समस्या र जिज्ञासा हो हातखुट्टा झमझम गर्नु । प्रायःले बिनासित्ति हातखुट्टा झमझम्याइरहेको महशुस गर्छन् । खाशमा यसो हुनुको ६० देखि ७० प्रतिशत कारण मानसिक हो । मानसिक रुपमा त्यस्तो म...
मंसिर २०, २०७४ बिहिवार ००:४१:२६
मलाई कहिलेकाहिँ वाथरुम जानेवित्तिकै पिसाब लाग्दैन । कहिले छिनछिनमा पिसाव लाग्छ किन होला ? प्रोष्टेट ग्रन्थिको तौल औसतमा १० देखि २५ ग्रामसम्म हुन्छ । ५० वर्ष नाघेका पुरुषमा प्राय प्रोष्टेट ग्रन्थि बढ्ने क्रममा हुन्छ । ग्रन्थि वृद्धि हुने सिलसिलामा पिसाबनलीको प्वाल साँगुर...
घरमै डाक्टर– कुन अवस्थामा रक्तदान गर्न मिल्दैन ?
मंसिर १९, २०७४ मगलवार ११:४४:००
मलाई रक्तदान गर्न मन छ तर कुन अवस्थामा रक्तदान गर्नुहुँदैन भन्ने बारे जानकारी पाए आभारी हुने थिएँ । जनेश रक्तदान गर्ने व्यक्ति स्वस्थ हुनु जरुरी छ, ताकि रगत लिनेलाई कुनै प्रकारको रोग नलागोस्। दान गरिने रगतमा जीवाणु, परजीवी, औषधि तथा कुनै पनि प्रकारका हानि...
मंसिर १७, २०७४ सोमवार ०१:४४:५१
हाम्रो विवाह भएको चार वर्ष पुरा भएको छ । परिवार नियोजनको साधन पनि प्रयोग गरेकी छैन । तर बच्चा हुन सकेको छैन । के कारणले यस्तो हुन्छ ? - एस परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगर्ने स्वस्थ दम्पत्तिमध्ये ८० प्रतिशतको विवाह भएको दुई वर्षमा सन्तान हुन्छन् । त्यसअवधिमा २०...
मंसिर १७, २०७४ आइतवार ११:५९:००
मलाई अत्यधिक टाउको दुख्ने गरेको छ । उपचारका लागि धेरै अस्पताल पुगिसकें तर अझै खाश ठिक भएन । धेरैले माइग्रेन भएको भन्छन् । यो किन हुन्छ ? उपचार छ कि छैन ? इन्दु माइग्रेन अत्यधिक टाउको दुख्ने समस्या हो । यो टाउको दुखाइको एउटा प्रकार मात्रै हो । सबै टाउ...
घरमै डाक्टर– नवजात शिशुको आँखा किन पाक्छ ? कसरी रोक्ने ?
मंसिर १६, २०७४ शनिवार १६:१९:११
बच्चा जन्मेको २८ दिनभित्र आँखामा पहेंलो पिप जस्तो कचेरा देखिनु, आँखा रातो हुनु तथा सुनिनु आदि लक्षणहरु देखिनुनै नवजात शिशुमा आँखा पाक्ने रोग हो । के –के कारणले गर्दा हुन्छ ? यौनजन्य संक्रमण भएका आमाबाट शिशु जन्मेमा असुरक्षित प्र...
घरमै डाक्टर: किन श्वास गन्हाउँछ, छुट्कारा पाउने उपाय के हाेला ?
मंसिर १५, २०७४ शुक्रवार १४:४१:००
साथीभार्इहरु मेराे श्वास असाध्यै गन्हाउँछ भन्छन् तर मलार्इ थाहा हुँदैन । मैले अनेक प्रयास पनि गरें तर राेकिएकाे छैन । के कारणले होला, कसरी छुट्कारा पाइन्छ ? रमेश श्वास गन्हाउने अहिले आम मानिसको साझा समस्या भएको छ । युवादेखि वृद्धहरुसम्म यो समस्याबाट ग्रसित देखि...
मंसिर ९, २०७४ शनिवार २३:०८:०६
हामी बच्चा जन्माउने योजनामा छौं, के- के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ? - एस विवाहित दम्पत्तीले सन्तानको तयारी गर्नुअघि योजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो समाजमा गर्भवती भएपछि एकैपटक डाक्टरकोमा जँचाउन जाने चलन छ । तर, सन्तानको योजना बनाउनुअघि नै दम्पतीहरु चिकित्सकको परामर्शमा आउ...
कात्तिक २५, २०७४ शनिवार २२:२०:००
पुरुष र स्त्रीबीच यौन सम्बन्धमा आउन सक्ने जटिलताहरू मूलतः तीन कारणबाट आउँछन्– मानसिक, शारीरिक अनि मनोशारीरिक । प्रौढ अवस्था यस्तो उमेर हो जसमा तीनवटै कारणले यौन जटिलता आउन सक्छ । पुरुषभन्दा महिनावारी बन्द हुने बेलाका महिलाहरूको यो उमेर बढी संवेदनशील हुन्छ। ...
कात्तिक १५, २०७४ बुधवार १५:२२:०३
कब्जियत आफैँमा कुनै रोग होइन । यो पेट, आन्द्रा अथवा समग्र पाचन प्रणालीमा उत्पन्न समस्याको असर मात्र हो । प्राकृतिक रूपमा कब्जियतको समस्या कम गरी दिसा खलास गर्न यस्ता खानेकुरा खानमा जोड दिनुपर्छ ः रेसायुक्त खाना गहुँ, मकै, बोक्रासहितको आलु, हाडेबदाम, तरकारी, जौजस्ता ...
भदौ ३१, २०७४ शनिवार १६:५६:००
भिरिङ्गी कस्तो रोग हो ? कसरी सर्छ ? उपचार के होला ? - केडी, कतार नेपालका सहरी क्षेत्रदेखि गाउँगाउँसम्म सबैतिर यौन सम्पर्कका माध्यमबाट सर्ने रोग व्याप्त छ। मानिसको यौन आदतमा निर्भर रहने भएकाले यस्ता रोग कुनै वर्ग वा समुदायमा सीमित नरहन सक्छ। यौन सम्पर्कका क्रममा अथवा...
भदौ २७, २०७४ मगलवार २२:०५:००
कुनै बेला यस्तो थियो जतिखेर किशोर किशोरीहरु चौरमा खेल्दा खेल्दै खेरी घुडामा चोट लागेर वा साइकलबाट लडेपछि उपचारका लागि हाड जोर्नी विज्ञका दर्गुर्थे । अब जमान फेरिसकेको छ । एउटा सानो कोठामा घन्टौसम्म मोबाईल खेलाउँदा खेलाउँदै नसासम्बन्धि गम्भीर समस्या लिएर आध...
भदौ २७, २०७४ मगलवार २०:१८:११
गर्भावस्थामा किन आउछ मुखमा अमिलो पानी ? - एसके गर्भावस्थामा पेटको आकार बढेर आमासयमा दवाव पर्छ । त्यसले गर्दा भल्भ खुकुलो भएर अमिलो पानी आउने लक्षण बढ्छ । अर्को कारण गर्भवती अवस्थामा हुने हर्मोनको गडबड हो । त्यसले पनि अमिलो पानी आउने, वाकवाकी लाग्ने बनाइदिन्...
भदौ २६, २०७४ सोमवार १७:१२:४७
बालबालिकाको अण्डकोष र डिम्वासयजस्ता अंगबाट हुने क्यान्सर कस्तो हो ? लक्षण के हुन्छ ?- केपी शुक्राणु (Sperm) र अण्डा (Ovum) बनाउने अण्डकोष र डिम्वासयजस्ता अंगबाट हुने क्यान्सरलाई जर्म सेल ट्युमर (जिसिटी) भनिन्छ। यो रोग वंशाणुगत हुन सक्ने भएकाले परिवारका धेरै सदस्यला...